Dr. Abiyyi Ahmad Dura Taa'aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A Dura Taa'aa DhDUO ta'uudhaan filatamaniiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dr. Abiyyi Ahmad Dura Taa’aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A Dura Taa’aa DhDUO...
Dr. Abiyyi Ahmad Dura Taa’aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A Dura Taa’aa DhDUO ta’uudhaan filatamaniiru
Ob. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa akka ta'etti itti fufa.
Dr. Abiyyi Ahmad dura taa’aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A dura taa’aa DhDUO ta’uudhaan filatamaniiru. Ob. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa akka ta’etti itti fufa. Jijjiirraan dura taa’aa dhabaa kuni kan barbaachiseef dorgommii muummee ministeraaf godhamuuf haala mijeessuudhaaf.
Muummee ministeraa ta’uu kan danda’u nama dura taa’aa ADWUI ta’ee fi nama miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta’eedha. Murteen DhDUO kan ifa godhe yoo jiraate, haala qabatamaa siyaasa Itoohiyaa isa mmaa keessatti, wolitti gaarriffannaa DhDUO fi ABUT jidudu jira kana kessatti, Lammaa miseensa paarlaamaa hin taane irra Abiyyi miseensa paarlaamaa ta’e carraan muummee minsiteraa ta’uu foyya’aa kan qabu ta’uu isaati. DhDUo’n kan irra geette nama miseensa paarlaama hin taane miseensa paarlaama akka ta’uuf haala mijeessuu irra nama miseensa paarlamaa ta’e dura taa’aa dhaabaa godhuudhaan filannoo muumme ministeraaf haaladure mijeessuun irra salphaa ta;uu isaati. Woyyaanee abdannee osoo hin taane hujii manaa keenna hojjanneeti filannoo muummee ministeraa kanaaf dhiyaachuu kan qabnu.
Amalli Woyyaanee ganuu fi mucucaachuudha. Wanti isii amananii godhan tokko jiraachuu hin qabu. Nama miseensa paarlaama hin taane qabatanii deeggarsa Woyyaaneetiin ni darba jedhanii itti deemuun, osoo Woyyaaneen waadaa feete seentee, waan fudhatama qabuu miti. Bara 1992 Woyyaaneen ABOf waadaa heddu seenteeti daqiiqaa dhuma irratti kan gante. Ammas wadaa isii, filannoo parlaamaan geggeessuu ykn filannoon malatti Lammaa muummee minsteraa taasisuu jedhu abdanne funduratti deemuun dogoggora durii irraa barachuu dhabuudha. Nama ulaagaa hunda guute qabatanii inni akka filatamuuf duula geggeessuudha ammatti siyaasni abshaalli. Lammaan osoo filame fedhii hundaa keennaatti. Garuu, kan qabsaayaa jirru Woyyaanee woliin ta’uun dagatamuu hin qabu. Haala kana keessati kan gubbaa fuudhaaf tan bobaa buuste akka hin taane.
Ob. Lammaan dura taa’aa ADWUI ta’uu ni danda’a. Garuu, miseensa paarlaamaa biyyatii waan hin taaneef carraan inni muummee ministeraa ta’uu dhiphaadha. Haala qabatamaa yeroo ammaa siyaasni biyyattii keessa jiru kanatti Woyyaaneen Lammaa Magarsaa akka muummee ministeraa ta’uuf jecha haala ni mijeessiti jedhnii eeguun sirri miti. Woyyaneen dhimma ufiif heera ni jallisti. Lammaan akka filatamuuf heera ni jallisti, akkasums Lammaan gara paarlaamaatti akka filatamuuf hala ni mijeessiti wanti nama jechisiisu hin jiru.Woyyaneen heera jallisti, ykn hanga Lammaa gara paarlaamtti filatamuuf filannoo mumme ministera atursiisti taanaan kuni mallatto Woyyaanee jijjiiramuudhaaf fedhii argisiisan keessa isa tokko. Mallatooleen hanga ammatti argutti jirru, labsii yeroo muddamsuus dabalatee, jijjiirama wanti jedhu gurra Woyyaanee kan hin dhaqqabne ta’uu isaati. ‘Lammaa waan hin taaneef moo’atame. Nuti isiniin jennee turree’ boru dhufuuf deemu jalaa bayuuf hundi Dr. Abiyyi muummee ministeraa akka ta’uu qabsoo fi duula kallattii hundaa haa geggeesinu. Kana ammatti kan nu feesisu. Biyyaa fi ummata jaarraa tokkoo oliif gabrummaa jala ture qabannee yeroon waan xixiqqoo irratti galaaffannu hin jiru.
Previous articleXurree Kiiloo 4 ittiin seennu dhiisne humnaa fi yerooo keenna gidaara dhiibuu irratti galaafachuun abshaalummaa siyaasaa ta’uu hin danda’u
Next articleLabsiin Yeroo Muddamaa aarii ummataa daran hammeessuu malee hin tasgabbeessuu